भूलेर पनि नगर्नुहोस् चिनीको यसरी प्रयोग, नत्र आइपर्न सक्छन जिबनमा यस्ता रोगका सम’ स्या ! समयमै जानकारी लिनुहोला – Annapurna Daily
भूलेर पनि नगर्नुहोस् चिनीको यसरी प्रयोग, नत्र आइपर्न सक्छन जिबनमा यस्ता रोगका सम’ स्या ! समयमै जानकारी लिनुहोला
On Jul 25, 2021 4,077
एजेन्सी । खाद्यपदार्थमा चिनीको मात्रा बढी हुनु स्वास्थ्य स’मस्याको प्रमुख कारण रहेको पाइएको छ। यद्यपि, कति चिनी खानु स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हो भन्ने हालसम्म प्रमाणित भइसकेको छैन । तर, अमेरिकी हार्ट एसोसियनका अनुसार पुरुषले एक दिनमा ३७ दशमलव ५ ग्राम अर्थात् एक सय ५० क्यालोरीबराबर चिनी खानु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, महिलाको हकमा एक दिनमा २५ ग्राम अर्थात् एक सय क्यालोरी बराबर उपयुक्त छ। तर, एक व्यक्तिले ७६ दशमलव ७ ग्राम चिनी खाने गरेको पाइएको छ। जसले स्वास्थ्यमा यस्ता समस्या निम्त्याउने गरेको छ ।
मोटोपना: चिनीको अत्यधिक सेवन मोटोपनाको प्रमुख कारण हो। चिनीमा उच्च क्यालोरी मात्रा हुने भएकाले मोटोपनको समस्या निम्तिने गर्छ । उच्च चिनीयुक्र सोडा, जुस, चिया, कफी, केकजस्ता खाद्यपदार्थको सेवनले मोटोपना बढ्छ। यस्ता खाद्यपदार्थको सेवनले भोक लाग्ने हुँदा बढी खाना खाइन्छ । फलस्वरूप शरीरमा क्यालोरीमा मात्रा बढ्न गई मोटोपन हुन्छ।
मुटुरोग: आजकल विश्वभर नै मुटुरोगीको समस्या बनेको छ। जसको कारण चिनीयुक्त खाद्यपदार्थ पनि प्रमुख हो । शरीरमा आवश्यकताभन्दा बढी चिनीको मात्रा हुँदा उच्च रक्तचाप र ब्लडसुगरको सम्भावना बढेर जान्छ । रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुँदा धमनीमा बोसो जम्मा हुन्छ र धमनी साँघुरो हुन जान्छ, जसलाई मेडिकल भाषामा एथोरोस्क्लेरोसिस भनिन्छ । यसले गर्दा रक्तसञ्चारमा समस्या आउने भएकाले मुटुमा विभिन्न समस्या देखापर्छन्।
क्यान्सर: रगतमा चिनीको मात्रा बढी भएमा भिटामिन सीको कमी हुन्छ। फलस्वरूप शरीरमा प्रतिरोधी क्षमतामा एकाएक कमी आउँछ । त्यस्तै, चिनीकै कारण ग्रोथ हार्मोनको उत्पादनमासमेत कमी आउँछ । शरीरमा कोषको वृद्धि नियन्त्रण गर्न इन्सुलिनको महवपूर्ण भूमिका छ। क्या’न्सरजन्य कोषको वृद्धिमा पनि सघाउ पुर्याउँछ। अनि, क्या’न्सरको जोखिम बढेर जान्छ।